CIYAARTA UGU WANAAGSAN (AR) CIYAARAHA ANDRIOD & IPhones sanadka 2021
Bogga ugu weyn Ciyaaraha Xaqiiqda Ugu Wanaagsan (Ar) ee loogu talagalay Andriod & iPhones Sanadka 2021 -ka
Ciyaaraha Xaqiiqda Ugu Wanaagsan (Ar) ee loogu talagalay Andriod & iPhones Sanadka 2021 -ka
Taleefannada android iyo iPhone waxay u fureen isticmaaleyaashooda fursado badan oo dhab ah maantana ciyaaro badan oo horumarsan ayaa dhowaan soo baxay si kor loogu qaado waayo -aragnimada isticmaalaha.
Si kastaba ha noqotee, miyaad weydiineysaa su'aalahan, waa maxay xaqiiqda la kordhiyay ee ciyaarta? Oo sidee bay xaqiiqda la kordhiyay u shaqaysaa? Markaa fiiro gaar ah u yeelo dib -u -eegiddan maadaama ay ka bixinayso dhammaan ku saabsan ciyaaraha dhabta ah (AR) ee loogu talagalay androids & iPhones sanadka 2021.
Waa maxay xaqiiqda la kordhiyay?
Qaamuuska Merriam-Webster wuxuu ku qeexaa AR inay tahay nooc la xoojiyay oo xaqiiqda ah oo la abuuray iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad si loogu dul dhejiyo macluumaadka dhijitaalka ah quudinta kaamirada nool.
Erayada fudud, AR waxay u oggolaanaysaa nuxurka dhijitaalka ah inuu u ekaado inay tahay qayb ka mid ah adduunka jir ahaaneed. Tani waxay kaga duwan tahay Virtual Reality (VR) kaas oo adeegsadayaasha u gudbiya adduun gabi ahaanba digital ah.
Xaqiiqada la kordhiyay waa farsamo kor u qaadeysa sawir kombuyuutar soo saaray aragtida qofka isticmaala ee dunida dhabta ah, sidaasna ku bixinaya aragti isku dhafan. Kani waa nidaam ka kooban saddex astaamood oo aasaasi ah: isku-darka adduunyada dhabta ah iyo kuwa is-dhexgalka ah, is-dhexgalka waqtiga-dhabta ah iyo diiwaangelinta 3D ee saxda ah ee walxaha dhabta ah iyo kuwa dhabta ah.
Waa maxay xaqiiqda la kordhiyay ee ciyaarta?
Xaqiiqada la kordhiyay (AR) ayaa sida caadiga ah ka dhawaajisay sida duurjoogta, fikrad mustaqbal leh, laakiin farsamada ayaa jirtay in ka badan 50 sano hadda.
AR waxay si dhab ah u xukumaan warshadaha ciyaarta mobilada iyagoo noqda mustaqbalka ciyaaraha mobilada. Ciyaaraha dhabta ah ee Android ee loo adeegsado iPhones -ka toogashada adeegsadayaasha ciyaarta maanta waxay ku raaxeysan karaan khibradda ku habboon taleefannadooda casriga ah.
Barnaamijyada AR waxay socodsiiyaan gamut laga bilaabo isku -darka khariidadaha is -dhexgalka ah iyo qolalka bandhigyada dalwaddu ilaa iskahorimaadyo badan oo badan. Ka fikir waxa barnaamijyadan ciyaaraha ay siin karaan ciyaartooyda iyo kuwa runta jecel. Isticmaalayaasha ayaa si macno leh ugu raaxeysan kara ciyaarta inta ay ku sugan yihiin ciyaarta.
Sidee ayay u shaqeeyaan ciyaaraha dhabta ah?
Xaqiiqada la kordhiyay ee shaqooyinka ciyaarta iyada oo lagu kobcinayo dunida dhabta ah macluumaadka dhijitaalka ah iyo warbaahinta, sida moodooyinka 3D iyo fiidyowyada, oo ku dul-duubaya muuqaalka kamaradda ee Smartphone-kaaga, kiniiniga, PC-ga ama muraayadaha ku xiran. Nidaam kasta oo AR ah wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood - qalab, softiweer, iyo codsi.
Qalabku wuxuu tilmaamayaa qalabka kaas oo lagu sawiro sawirada dalwaddu. Xaaladdan oo kale, iyagu waa taleefannadaada casriga ah, iPhones. Ciyaaraha dhabta ah ee la kordhiyay si ay ugu shaqeeyaan aaladaha, waa inay lahaadaan qaybaha qalabka sida dareemayaasha iyo soo -saareyaasha si ay u taageeraan dalabaadka sare ee AR. Waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha qalabka muhiimka ah:
A. Hawlaha: Kani waa maskaxda aaladda. Waa go'aamiyaha ugu weyn ee xawaaraha taleefanka. Xawaaraha taleefanka, si kastaba ha ahaatee, wuxuu go'aamiyaa haddii ay awoodi doonto inay maamusho shuruudaha culus ee AR oo ay weheliyaan shaqooyinka caadiga ah ee taleefanka.
B. Qaybta Habaynta Sawirka (GPU): Hawsha GPU -gu waxay ku jirtaa soo -bandhigga muuqaalka taleefanka muuqaalka ah. Markaa, AR waxay u baahan tahay GPU-yada waxqabadka sare leh si nuxurka dhijitaalka ah loo abuuro loona dulsaaro si aan kala go 'lahayn.
C. Dareemayaasha: loogu talagalay taleefannada android ama aaladda iPhones si ay macno ugu yeeshaan deegaankooda. Dareenka Qotada ayaa cabiraya qoto dheer iyo masaafada. Gyroscope wuxuu ogaadaa xagasha iyo booska taleefankaaga. Xawaaraha -dheereeya wuxuu ogaadaa isbeddelada xawaaraha, dhaqdhaqaaqa, iyo wareegga. Dareenka Dhawaanshaha wuxuu cabbiraa u dhawaanshaha walxaha. Sensor Light wuxuu cabbiraa xooga iyo iftiinka iftiinka
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la tilmaamo, in jiilalka dambe ee taleefannada gacanta ay leeyihiin awooddan AR.
Software -ku waa qayb kale oo muhiim ah oo ah ARKit (Apple) iyo ARCore (Android). Midda kale software -kan si ay u dhisaan waaya -aragnimada dhabta ah ee la kordhiyay, waxay leeyihiin 3 teknolojiyad aasaasi ah.
A. Fahamka deegaanka: si aad u samayso khariidadda taleefankaaga tilmaamaha astaamaha caanka ah iyo sagxadaha fidsan ee la xiriira agagaarka.
B. Raadinta Mooshinka: Tani waxay suurtogal ka dhigaysaa in taleefankaagu khariidadeeyo booskiisa marka loo eego bay'addiisa. Markaa, taas oo suurtogal ka dhigaysa in alaabada Virtual lagu beero goobahooda dijital ee loogu talagalay sawirka marka loo eego hareeraha.
C. Qiyaasta iftiinka: Qaybtani waxay ka dhigaysaa taleefanka inuu awood u yeesho inuu arko deegaanka.
xaaladda iftiiminta hadda jirta si loo dhigo walxaha dalwaddu isla duruufaha nalalka si kor loogu qaado xaqiiqada.
Goobta Codsiyada AR waxay leedahay keydkeeda u gaarka ah sawirrada dalwaddii iyo caqli -galinta kicinta. Waxay ku shaqeeyaan iyagoo ka soo jiidaya sawirrada dalwaddu xog -ururintooda oo ay u soo saaraan sawirrada tooska ah.
Waxaa jira guud ahaan 2 siyaabood oo codsiyadu u kiciyaan astaamaha AR-Raad-raac ku-saleysan Calaamadee iyo raad-raac aan Calaamad lahayn.
A. Raadinta ku-saleysan calaamadeeyaha: Qaabkani wuxuu adeegsadaa astaamaha indhaha, sida furayaasha QR, si loo kiciyo astaamaha AR. Markaad ku tilmaamto kaameerahaaga mobilada mid ka mid ah koodhadhkan, codsigu wuu aqoonsan yahay wuxuuna dusha ka saarayaa sawirka dhijitaalka ah ee shaashadda.
B. Raadinta calaamad-yar: Raad-raaca sumadeeyaha ayaa kiciya marka ay aqoonsadaan astaamaha dhabta ah ee dhabta ah. Qaabkan waxaa lagu saleeyay aqoonsiga shayga.
Sideed u ciyaareysaa ciyaaraha AR?
Si loo ciyaaro ciyaaraha AR, qofku waa inuu fahmaa hababka kala duwan ee ciyaar kasta oo kala duwan oo AR ah. Hababka kicinta iyo xakamaynta dhammaantood way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran barnaamijka. Guud ahaan, dhammaan cayaaraha AR waxay ku xiran yihiin isticmaalka kamaradda taleefanka.
Sidaa darteed, tallaabada ugu horreysa ee lagu ciyaaro ciyaaraha AR waa in marka hore la helo taleefan android ah oo si fiican loo cayimay ama iPhone leh astaamo garaafyo wanaagsan, ka dibna soo dejiso ciyaarta AR ee aad dooratay oo raac tilmaamaha dejinta ciyaarta.
Waa ku habboon tahay inaad ogaato in ciyaar kasta ay leedahay tilmaamo iyo waayo -aragnimo kala duwan oo aad ku ciyaarto ciyaar kasta oo laga helo dukaanka ciyaarta ama dukaanka app -ka, waa inaad isku daydaa inaad fahanto shuruudahooda iyo qaababka kala duwan.
15-ka cayaar ee ugu fiicnaa ee loogu talagalay android iyo iPhone
Blog -kan wuxuu fidiyaa cayaaraha aadka u hal -abuurka leh ee AR kuwaas oo macno ahaan ruxaya suuqyada AR kuwaas oo ka socda khariidadaha is -dhexgalka ilaa bandhigyada dalwaddu.
Diyaar ma u tahay inaad wax ka barato nooca ugu xiisaha badan adduunka ee ciyaarta dhabta ah ee la kordhiyay?
Miyaad diyaar u tahay inaad maal gasho ciyaaraha mobilada ee AR, halkan waxaa ku yaal liiska 15-ka barnaamij ee xaqiiqda ah ee la kordhiyay 2021 ee laga heli karo Google Play Store iyo Apple Store kuwaas oo dhiirigelin leh. Aynu si qumman u dhex galno oo aan u baranno qaar ka mid ah barnaamijyada dhabta ah ee dhiirrigelinta leh ee ugu dhiirrigelinta badan marka dib loo eego siday u kala horreeyaan ee qiimeynta isticmaalaha sare.
1. Zombie, Orod!
Barnaamij bilaash ah oo u fidiya tacaburro xiiso leh adeegsadayaasha Android iyo macruufka waxaana si gaar ah loogu talagalay kuwa jecel socod -socodka subaxnimada magaalada oo dhan.
Socodkaaga subax waligiis isku mid ma noqon doono markaad bilowdo adeegsiga barnaamijkan ciyaarta dhabta ah ee la kordhiyay. Bilowgii, ciyaartu waxay ku tuuraysaa ciyaaryahanka adduun ay ka buuxaan zombie halkaas oo ay tahay inaad ku ordo oo aad ku uruuriso alaabada jidka si aad uga badbaado weerarka zombie.
Sidoo kale, ciyaartu waxay ciyaareysaa muusig iyo sheeko dhiirigelin leh si kor loogu qaado waayo -aragnimada jimicsiga subaxnimada iyo awoodda
Qiimeynta Isticmaalaha: 5
Faahfaahin horumariyaha: ZombiesRunGame
2. NightenFell: AR la wadaago
Ciyaaryahan fara badan oo dhab ah oo toogasho toogasho ah oo bixiya majaajilo, qarsoon. Waxay si fiican ugu shaqaysaa labada Android iyo iPhone.
Sidoo kale, abka abka ayaa u saamaxaya ciyaaryahanka inuu qaboojiyo waqtiga, ka difaaco adduunka majaajilada dalwaddu toogashada, iyo wax kaloo badan.
Qiimeynta Isticmaalaha: 4.7
Faahfaahin horumariyaha: Hook bang
Oo ka mid ah dhowr arrimood oo AR ah, Geocaching waa barnaamij aad u dhexgal ah oo lagu kordhiyay ciyaarta ciyaarta oo runtii si weyn u taagan. Iyada oo leh shaqsi ugaarsiga khasnadeeda oo ay weheliso AR, adeegsadayaashu waxay helaan inay sahamiyaan agagaarkooda, iyagoo raadinaya kaydadka Geo.
Geo-Caching waxay u saamaxaysaa adeegsadaha inuu helo geocache ama sawir-galitaan oo dib u qariyo si uu u helo.
Qiimeynta Isticmaalaha: 4.4
Faahfaahin horumariyaha: GeoCaching
4. Jurassic World Nool
Muuqaalka ciyaartaan wuxuu ku milmay waqtiyadii taariikhdii hore markii hal -abuurayaasha waaweyn ay dhulka ku socon jireen. Ciyaartu waxay ku geyn doontaa adduunyo halkaas oo xayawaankii taariikhiga ahaa ee duurjoogta ahaa ay si xor ah ugu ordayaan ilbaxnimada casriga ah.
Waxaad la kulantay noocyo kala duwan oo xayawaan taariikhi ah sida mammoths, dinosaurs, tyrannosaurus, iyo pteranodons waxay aruuriyaan shaybaarka DNA -ga kuwa kale si ay u abuuraan raptor aad adigu iska leedahay.
Sidoo kale, ciyaartu waxay kuu oggolaaneysaa inaad la wadaagto abuurkaaga ciyaartoy kale isla markaana aad la tartanto xayawaannada kale waqtiga-dhabta ah.
Qiimeynta Isticmaalaha: 4.3
Faahfaahin horumariyaha: Ludiya
5. Boqorka Barkadaha
Boqorka barkadaha waa ciyaar bilyaar oo leh muuqaalo cajiib ah iyo dhisme gaar ah. App -ku wuxuu ka kooban yahay miiska barkadda oo siiya isticmaaleyaashiisa muuqaal iyo dareen ah inay jir ahaan joogaan horjoogaha dhijitaalka ah.
Sidaa darteed, waxay ku bixisaa taageero onlayn ah ikhtiyaar badan iyo waayo -aragnimo dhab ah iyadoo laga faa'iideysanayo Teknolojiyadda AR oo leh khibrad barkad is -dhexgal ah.
Qiimeynta Isticmaalaha: 4.2
Faahfaahin horumariyaha: Uken
App-kan ayaa hubaal u ah dhiirigelin dhowr arrimood oo ku saleysan AR. Bilowgeedu wuxuu calaamad u noqday isbadalka warshadaha ciyaaraha. Pokémon Go wuxuu caan ku yahay waxqabadkiisa cajiibka ah, waayo -aragnimada isticmaale ee la yaabka leh, iyo soo jiidashada badan.
Ciyaartu waxay bixisaa goob dagaal oo toos ah waxayna u keentaa walxo dalwaddii nolosha waqtiga-dhabta ah. Isticmaalayaashu waxay arki karaan oo ku qaban karaan Pokemon agagaarkooda.
Qiimeynta Isticmaalaha: 4.1
Faahfaahin horumariyaha: Niantic
7. Madow: Mawduuca Koowaad
Madow: Mawduuca koowaad waa ciyaar ku saleysan sheeko naxdin leh halkaas oo adeegsaduhu yahay jilaaga baaraya lumitaanka saaxiibkiis. Waa mid ka mid ah cayaaraha barnaamijyada dhabta ah ee dhabta ah ee ugu macquulsan oo ay ka buuxaan waxyaabo qarsoon iyo madadaalo abuuraya shaki gelinta kuwa wax jecel.
Ciyaartan ayaa kaa qaadi doonta meel ka baxsan xariirka oo u gudubta koonkan isbarbar socda waayo -aragnimo cajiib ah halkaas oo aad ka heli doonto tilmaamo oo isku day inaad xalliso kiiska.
Waayo-aragnimada guud waa mid la yaab leh, oo xaqiiqda la kordhiyay ee sida adag loogu xardhay barnaamijka dhexdiisa waa mid mudan.
Qiimeynta Isticmaalaha: 4.0
Faahfaahin horumariyaha: warshad
8. Ciidanka Robots -ka
Ciidanka Robots waxaa iska leh nooca ciyaarta toogashada ee Android iyo iPhone. Waxay bixisaa khibrad toogasho qofkii ugu horreeyay oo cajiib ah oo leh dhinacyadeeda AR. App -ka laftiisa ayaa lagu dhex daray is -dhexgal dhex -dhexaad ah iyo waxqabad aan caadi ahayn, isagoo hubinaya in ciyaartoygu ku raaxaysan karo burburinta cadaawayaasha robotic ee cabbirrada kala duwan leh.
Ciyaartu sidoo kale waxay dareentaa sida aad ugu dhaqaaqdo adduunka dhabta ah waxayna ku celcelisaa khibradda adoo ku daraya ciyaarta.
Faahfaahin horumariyaha: Singergia
9. Knightfall AR
Knightfall waa ciyaar istiraatiijiyad dagaal ah oo adeegsadaha gaysa adduunka Knights iyo Warriors. Ujeedadu waa in Acre laga difaaco cadawga (Mamluk Warriors).
Ciyaaruhu waxay geliyaan adeegsadaha dusha sare iyo qaabkiisa AR, aragtida adeegsaduhu waxay u dhaqantaa sidii nidaam bartilmaameed oo kuu oggolaanaya inaad ku xabbiso unugyada cadowga markay kuu soo socdaan.
Waxaad dili kartaa cadawga, kasban kartaa dahab, xoojin kartaa difaacyadaada, oo dib u riix kartaa dagaalyahannada. Markasta oo aad ku guuleysato dagaalada oo aad guuleysato, inta badan waxaad furaysaa astaamaha iyo caqabadaha cusub. Intii lagu guda jiray ciyaarta ciyaarta, AR waxay sameysaa sixirkeeda waxayna siisaa adeegsadaha khibrad nool oo ficil leh.
Intaa waxaa sii dheer, ciyaartu waxay leedahay astaamo ku timaada qaab “Sawir Sawir”, halkaas oo ciyaartu kuu saamaxayso inaad xulato jilayaasha ciyaarta oo aad u isticmaasho maaweeladaada.
Qiimeynta Isticmaalaha: 3.8
Faahfaahin horumariyaha: AeNetworks
10. Harry Potter: Wizards waa midoobeen
Harry Potter; Ciyaaraha Wizards Unite waa madadaalo iyo ciyaar xiise ku saleysan oo masiibo ku dhufatay dunida sixirka ee Harry Potter.
Midda kale si looga adkaado cadowga, waa in Wiishadaha adduunku ay u midoobaan sidii arrintan loo xallin lahaa loona wada dagaallami lahaa. Ciyaartu waa saaxir, waana inuu la dagaallamaa jidkiisa isagoo u maraya cadow si uu u soo uruuriyo waxyaabo kala duwan.
Qiimeynta Isticmaalaha: 3.7
11. Kubadda Kolayga AR
Kani waa mid kale oo heer sare ah oo la kordhiyay oo ku saleysan app-ka ciyaarta mobilada halkaasoo ciyaartoygu kubbadda ku toogto-waqtiga dhabta ah meel kasta.
Si ka duwan barnaamijyada kale ee liiskan ku jira, kubbadda Koleyga AR waxay ku saleysan tahay heerka isdhexgalka AR ee fudud. Lahaanshaha hab ciyaar oo kala duwan, oo ay kujirto ikhtiyaar badan, adeegsaduhu wuxuu macno ahaan ku raaxaysan karaa kubbadda kolayga shaqsi ahaan.
Qiimeynta Isticmaalaha: 3.3
Faahfaahin horumariyaha: Ciyaarta onkodka
12. Jenga AR (Android)
Ciyaartu waa mid sahlan, waa inaad ka wareejisaa baloogyada hal mar xarunta si aad ugu dhejiso dusha. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha ayaa imanaya marka munaaraddu ay dillaacdo, oo kii kiciya dhicitaanka munaaraddu uu lumiyo ciyaaraha.
Shaki la'aan, Jenga AR waa ciyaar hal -abuur leh oo leh astaamo kasta oo u dhexeeya muuqaallo yaab leh si ay u helaan kontaroolada iyo xitaa ikhtiyaar badan.
Qiimeynta Isticmaalaha: 3.2
Faahfaahin horumariyaha: FreeRange
13. Ugaarsiga Qasnadda Macbadka
Ugaarsiga Qasnadda Macbadka waa barnaamij kale oo loogu talagalay Android oo lagu kordhiyay ciyaaraha dhabta ah. Ciyaartu waxay isticmaashaa juqraafi si ay u taageerto habka dhabta ah ee la kordhiyay. Waxaa ka buuxa tan qarsoon, halyeeyada, iyo xiisaha ciyaarta gudaheeda, baaxadda ciyaarta weli waa sahlan tahay.
Xulashada ciyaarta, waxaad dooran kartaa inaad noqoto ilaaliye maaliyadeed ama ugaadhsade; si kastaba ha ahaatee, waa inaad raacdaa khariidada is -dhexgalka ah ee ciyaartu ku bixiso labada xaaladoodba.
Haddii aad u ciyaareyso sidii ilaaliyaha khasnadda, waa inaad abuurtaa tijaabooyin khasnadeed si ugaadhsatada ay ugu adkaato inay helaan khasnadda. Sidoo kale, haddii aad u ciyaareyso sida ugaadhsiga, waa inaad heshaa khasnadda.
Ugu dambeyntiina, si aad u hesho khasnadda, waa inaad ka gudubtaa jilayaasha Hindiga ah ee halyeeyada ah, kuwaas oo dhammaantood kor u qaadaya khibradda ciyaarta.
Qiimeynta Isticmaalaha: 3.1
Faahfaahin horumariyaha: Mobi-tech
14. Ingress Prime
Ingress Prime waa ciyaar istiraatiijiyadeed oo cajiib ah oo ciyaartoygu ku qasban yahay inuu kala doorto laba kooxood; ama ciyaartoygu waa qayb ka mid ah kuwa iftiimiyay ama kooxda iska caabinta. Doorashada labada dhinacba, ciyaartoygu waa inuu u dagaallamaa qaddarka koonka.
Iyada oo leh waayo -aragnimo la yaab leh, soo jiidasho leh, is -dhexgal iyo is -dhexgal leh, barnaamijku wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah cayaaraha dhabta ah ee dhabta ah ee loogu talagalay iPhone iyo Android.
Faahfaahin horumariyaha: Ingress
15. Beer Pong AR
Mustaqbalka ciyaaraha guddiga waa Beer Pong AR. Ciyaartu waxay siisaa isticmaaleyaasha inay doortaan agagaarka meesha ay rabaan inay ku rakibaan biirka, ka dibna waxay tuuri karaan kubbadaha ping pong.
Intaa waxaa sii dheer, Beer Pong AR ayaa sidoo kale kuu oggolaaneysa inaad xulato xagal ugu fiican ka hor intaadan tuurin kubbadda, oo kii ku quusa toban koob oo leh tuurista ugu yar ayaa ku guuleysta ciyaarta.
Qiimeynta Isticmaalaha: 2.6
Faahfaahin horumariyaha: Androidezone
Ciyaarta Xaqiijinta (AR) waxay noqotay isbeddel weyn dhowr sano ka hor iyadoo loogu mahadcelinayo cinwaannada sida Ingress iyo Pokemon Go. Ciyaarta AR waxay ka soo qaadataa ciyaaraha caadiga ah waxayna inta badan keentaa madadaalo ka baxsan Taleefanka Taleefanka.
Ciyaaraha dhabta ah ee la kordhiyay ayaa noqonaya kuwa ugu horeeya ee warshadaha ciyaaraha. Sidaa darteed, ciyaaraha AR waxay kuu oggolaanayaan inaad lahaato waayo -aragnimo la yaab leh oo macquul ah sida tan dhabta ah.
Si kastaba ha noqotee, cayaaraha kor ku taxan ee AR ayaa asal ahaan loo xushay inay ku siiyaan dhammaan khibradaha layaabka leh, ee soojiidashada leh ee ciyaartaan. Sidaa darteed, kuwani waa cayaaraha dhabta ah ee la kordhiyay (AR) ee loogu talagalay Android & iPhones sanadka 2021. Sidaa darteed, waxaa lagugu boorinayaa inaad ku raaxaysato waayo-aragnimadaada ciyaaraha ee ciyaaraha AR-kan.
Waa kuma Ciyaaryahanka ugu mushaarka badan NBA? | 10 -ka Ciyaaryahan ee ugu sarreeya NBA -da Adduunka
10-ka ugu sarreeya Ciyaartoyda ugu mushaarka badan Forbes 2021
Dib -u -eegista Faa'iidooyinka Humana Medicare 2022: Qorshayaasha ugu Fiican | Sida ay u shaqayso | Sharci Ama Fadeexad
Humana Medicare Advantage ayaa dib loo eegaa si ay u noqoto bixiyaha caymiska ugu fiican ee la heli karo. Xitaa tirada badan ee isdiiwaan gelinta…
Dib -u -eegista ClickBank 2022: Ma Xalaalbaa In Lacag La Sameeyo ama Khiyaano Weyn
Mid ka mid ah siyaabaha ugu xiisaha badan uguna fudud ee lacag looga samayn karo online waa iibinta alaabada dadka kale.
Daqiiqad 3 akhri
Faallooyinka H&R Block 2021: Sida ay u Shaqayso | Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Software-ka H&R Block waa mid ka mid ah software-yada cashuuraha ee ugu fiican. Waxay ku siinaysaa ammaan diirran, oo wareersan…
Faallada Tophatter Daacad ah 2021: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
In qofku uu nolosha ku soo maro khilaaf la'aan ama arrimo ka dhasha waa wax aan macquul ahayn. Iyadoo tirada ganacsiyada…
Dib-u-eegista Shaqada Qorayaasha 2021: Samee Illaa $ 30- $ 45/hr Qoritaan Aan Khibrad Lahayn
Waxaad doonaysaa goob aad lacag dheeraad ah kaga samayn karto qoraal, qofna wuxuu ku siinayaa Work Writers.…
DIB U EEGIDDA CREDIT KARMA: SIDEE AY U SAXSAN tahay
Credit Karma waa shirkad maaliyadeed oo caalami ah oo Mareykan ah oo la aasaasay 2007, taas oo calaamad u ah…